ओभरटेक गर्न खोज्दा मोटरसाइकल दु’र्घटना, एक जनाको मृ’त्यु ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ओभरटेक गर्न खोज्दा मोटरसाइकल दु’र्घटना, एक जनाको मृ’त्यु !
२७ असार, बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–९ शंकरपुर चोकमा मोटरसाइकल दु’र्घटना हुँदा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ भने एक जना घा’इते भएका छन् । दु’र्घटनामा सिद्वार्थ नगरपालिका–१ बेलहियाका २३ वर्षीय संयोग शेर्पाको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता डीएसपी खड्गबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
बुटवलबाट भैरहवा जाँदै गरेको ना ५ ख ७८०६ नं.को ट्रकलाई सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको लु २४ प ३२५४ नं.को मोटरसाइकलले शंकरपुरचोकमा ओभरटेक गर्ने क्रममा दु’र्घटना हुँदा ग’म्भीर घा’इते भएका शेर्पाको उपचारका क्रममा क्रिमसन अस्पताल मणिग्राममा मृ’त्यु भएको हो ।
मृ’तक शेर्पा मोटरसाइकलको पछाडि बसेका व्यक्ति हुन् । मोटरसाइकल चालक बेलहियाकै २० वर्षीय मुकुल लामाको अवस्था ग’म्भीर छ । उनको टाउकोमा चो’ट लागेको छ । ट्रक चालक बारा जितपुरका २६ वर्षीय सुरज प्रताप सर्राफ र ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।